Ko Hurumende yeSt. Kitts & Nevis rava Bhizinesi reCriminal?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Saint Kitts neNevis Kuputsa Nhau » Ko Hurumende yeSt. Kitts & Nevis rava Bhizinesi reCriminal?
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Rebhanoni Breaking News • nhau • vanhu • Saint Kitts neNevis Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Wtn
Unoda kutenga pasipoti yekunze? St. Kitts naNevis vakagadzirira kutengesa pasipoti yavo kune inovava zvakanyanya- zvakanyanya, zvirinani - uye zvese zviri pamutemo uye zviri pamutemo.
Zvakadii nezvekuva mugari wenyika yausina kumboshanyira uye usingambofaniri kushanyira, asi kuwana mukana kune dzimwe nyika zana nemakumi masere?
Hurumende yeSt. Kitts neNevis vakarangana neBritish Kambani CS Global Partners kuita izvi.
PR Newswire haina nyaya kuve chikamu chechirongwa chekusimudzira zviitiko izvi pasirese.
Nhasi CS Global Partners yakashambadza yakasarudzika mukuburitsa mutapi venhau paPR NewsWire kumutori venhau kuti atore nekuburitsa gwaro rekutya paRebhanoni nekutengesa zvizvarwa kuLebanese People kuti vave vagari veSt. Kitts neNevis
CS Global Partner kunyange ine yakatarwa yakatarwa yemapasipoti eSt Kitts neNevis nhasi uye yambiro iyi ndeye yenguva yakatarwa chete.
St. Kitts naNevis mukushayikwa kwekushanya kunoda mari. United States neEuropean Union vacharamba vachibvuma vagari veSt. Kitts neNevis vasina vhiza. IUnited States zvechokwadi ine chibvumirano chakakosha neSt. Kitts yechirongwa chekuwana zviri nyore mvumo yekushanda yeUS uye Green Card- zvese zviri kutengeswa.
Kutengesa kuva mugari wemo ndekwechazvino kuitika mubhizinesi mune dzakawanda nyika dzine nzara dzemari kutenderera pasirese. Nyika dzakadai dzinowanzo kuve nemukurumbira wakanaka pasirese, saka vagari vatsva vanonakidzwa nezvakanakira uye kuwana nyika dzavaisakwanisa kuwana mavhiza zviri nyore. Panyaya yaSt. Kitts, mugari anogona kupinda munyika dzinopfuura zana nesitatu asina vhiza.
Hugari hwakadai zvakare ari epashure masitifiketi ebasa uye makadhi egirini muUnited States.
CS Global Partners nhasi vakurudzira mhuri dzeLebanese kuti dzive vagari veSt. Kitts neNevis.
Iyi ndiyo meseji yakaparadzirwa kuVanhu veRebhanoni vakamirira Hurumende yeSt. Kitts neNevis
New Report Inoyambira nezve 'Yechitatu Mass Mass' kubva kuRebhanoni, Kunyanya kubva kuBi-Nationals seCrisis Accelerates
Kitts neNevis kuburitswa kwakatenderedzwa nenyika inomiririra CS GLobal Partners inotanga nemushumo werutyo rakagadzirirwa kuunza kushupika uye nevatori venhau kuti vatore kufarira nyaya yacho.
Chirevo chakaburitswa neCrisis Observatory paLebanon kuAmerican University yeBeirut chakagumisa kuti nyika iri kupinda murwendo rwechitatu rwevanhu vanobva munyika. Sekureva kweshumo, chiratidzo chemukati maererano nekupinda kweRebhanoni mumasaisa emigration wave mukana wakakura wekutama pakati pevechidiki veLebanon. Kubva pane ongororo yakaitwa gore rapfuura, 77 muzana yevechidiki veLebanese vakati vanofunga nezve kutama nekuitsvaga, uye chikamu ichi chiri chepamusoro pakati penyika dzese dzeArabhu.
Rebhanoni kubvira ipapo yakatsungirira matambudziko mazhinji, anosanganisira hondo, kuurayiwa, uye makakatanwa ezvematongerwo enyika nekuda kwemakumi emakore ehuwori nehutongi husina kunaka. Pondo reLebanese rakanyura nezvakakomberedza makumi masere muzana, nepo vanoisa mari varasikirwa nekuwana mari yavo yehupenyu. Nyanzvi zhinji, kusanganisira vanachiremba, vadzidzi, vanamuzvinabhizimusi, uye vagadziri, vasiya kana vari kuronga kuenda. Muzviitiko zvakawanda, vari kutora nyika dzechipiri dzakawanikwa nevabereki kana sekuru nasekuru vakasiya Rebhanoni mune emigration mafungu ekare.
Avo vasina kana backup yevagari vemadzitateguru vekare vakashandisa nzira dzisiri dzechivanhu kuti vawane ugari hwemo. Micha Emmett, CEO we CS Global Partners, chipangamazano chekuva mugari wekanzuru muLondon, akati huwandu huri kuwedzera hwevagari veLebanon vanga vachibvunza nezve Citizenship neInvestment (CBI) zvirongwa. CBI inzira yekuenda kune dzimwe nyika iyo investor anopa mari yakati wandei kune hupfumi hwenyika mukutsinhana nehugari hwemo, zvichizoguma nepasipoti yenyika iyoyo.
"CBI inowanzo kuve yakanakisa uye inomhanyisa nzvimbo yekutandarira kune avo vanotarisana vasina chokwadi munyika yokumusha kwavo uye vanoda nzira yekuchengetedza hupfumi hwavo neramangwana remhuri yavo," akadaro Emmett. “Zvinosuruvarisa, nyika yatiri kurarama inogona kunge isingatarisike, uye nguva dzakaipa dzinogona kutiwira chero nguva. CBI inobvumidza vanhu kuita chirongwa chekuchengetedza chaiyo nguva idzi. "
Mamwe eanonyanya kutsvakwa maCBI Zvirongwa ari muCaribbean, kwakatangira pfungwa. Ugari kubva kuSt Kitts uye Nevis 'CBI Chirongwa chinogona kuwanikwa pasina kunetseka kwekugara kwekugara kana kufamba. Maitiro ese anogona kuitwa online mukati meimwe nyaya yemwedzi yakati. Sekureva kwenyanzvi dziri mumagazini yeFinancial Times 'yePWM, chirongwa ichi parizvino chiri panzvimbo yepamusoro munyika.
Kitts neNevis vagari vanogona kuenda kunosvika zana nemakumi matanhatu nyika vhiza-yemahara kana nevisa-on-kusvika. Ivo vanogona zvakare kuwedzera vanovimba uye kupfuudza pasi kwavo ugari kuzvizvarwa zvinotevera.
Uye zvakare, hapana chimwe cheaya achangogamuchirwa St. Nevis Citizens anofanirwa kumboshanyira nyika yavanotakura pasipoti kubva.
Pasi pechinguva chakapihwa chekupihwa, mhuri inosvika ina inofanirwa kungopa USD150,000, ichitarisa kuderedzwa kweUS $45,000.
World Tourism Network Sachigaro Juergen Steinmetz akati:
Kunyadzisa paSt. Kitts naNevis yekugadzira iri kumashure kweshure kwehukama hwakatengwa.
Kuenda kune dzimwe nyika inyaya yakakomba uye inofanirwa kupihwa kune vanhu vanokodzera kutanga patsva munyika yavanonyorera kuva mugari wenyika.
Kutengesa kuva mugari wemo hakuna kuipa chete, kunokanganisa kutendeka kwehugari hwemo zvachose. Iko zvakare kuchengetedzeka uye chengetedzo kutyisidzira kwete chete kune nyika inopa pasipoti yekutengesa asiwo kune nyika dzese dzinopa mukana nekuda kwepasipoti iyi.